ပို့စ်ဘယ်လိုတင်ရမလဲမသိလို့ပါခင်ဗျာ — MYSTERY ZILLION
မူလ › About Forum
351 Mobile Devlopment
110 other mobile
September 2010 edited September 2010 in About Forum
ကျွန်တော်သိချင်တာလေး ကပို့စ်ဘယ်လိုတင်ကမလဲလို့ ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ် ..မေးချင်တာတွေလည်းအများြ ကိးပါ ဆွေးနွေးချင်တာလေးတွေလေး အများကြီးပါခင်ဗျာ ..သို့ပေမ့် ပို့စ် တစ်ခုကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာ မသိတဲ့အတွက် .
ပြောပြောပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ......ကျွန်တော်သိချင်တာလေးကအတော်ကိုအရေးကြီးနေလိုူ့ Mz ကအစ်ကိုတွေအမတွေအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးတွေလုပ်ချင်ပါသောကြောင့်ကျေးဇူးပြုရု်ပို့စ်တင်နည်းလေး ပြောပြပါရန်...လေးစာစွာဖြင့်ပြောကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ :cool::cool::cool::cool:
POst အသစ်တင်ချင်ရင် မိမိတို့ POst နှင့်ဆိုင်သော Forum Section အသီးသီးမှာ ကြည့်ပြီး POST New Thread ဆိူပြီး အောက်ဆုံးမှာတွေ့မှာပေါ့
အခြားသူ POST ကို ပြန်ဖြေချင်၊ ေ၀ဖန် အကြံပေးချင်ရင် Reply Thread ဆိုပြီး POST တွေရဲ့ အောက်ဆုံးမှာတွေ့လိမ့်မယ်:redface::redface::redface::redface:
ဟိုလေ ..ကျွန်တော် က forum ထဲကလို တင်ချင်လို့ပါ....
September 2010 edited September 2010 Administrators
သက်ဆိုင်ရာ category အောက်မှာ thread တင်နိုင်ပါတယ်။
အစ်ကိုစေတန် ရေ ကျွန်တော် General ထဲက other ထဲမှာလေ ...ကျွန်တော် .*vcr extension ပြောင်းချင်လိုူဆိူုတဲ့ ပိုစ်လေးတင်ထားပါတယ်အစ်ကို ကျွန်တော်ကို repaly ဘယ်သူမှလဲမပြန်ကြပါဘူး ..ကျွန်တော်တကယ်အေ၇းကြီးနေလို့ ..ပါအစ်ကိုစေတန်ရေ ..သိသူများရှိရင်မျှေ၀ပေးပါလို့ mz ကအစ််ကိုတွေအမတွေကို ...တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ......
ကျနော် reply ပြန်ထားတယ်။
extension ပြောင်းနည်းတော့ မဟုတ်ဘူး ... တခြားတစ်နည်း ....
အသုံး၀င်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ....